माडीवासीको शिर निहुरिने काम गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीका लागि गेट बन्द गर्छु : ताराकुमारी महतो « Nepal Page
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताराकुमारी काजी महतोले नेकपा (एमाले)को तर्फबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेकी छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएर माडीको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी महतो अहिले मेयरको लागि चुनावी अभियानमा लागेकी छन् ।
माडीका विभिन्न वडामा १२ वर्ष वडा सचिव र पाँच वर्ष उपमेयर भएर उनले काम गरेकी छन् । माडीमा लोकप्रिय मानिने महतो, यहाँका आदिवासी, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत माडीवासीको समस्या र पीडाको बारेमा जानकारी राख्छिन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर मेयरकी उम्मेदवार तारा कुमारी काजी महतोसँग कुलप्रसाद काफ्लेले गरेको कुराकानीको अंशः
हामीले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरेर प्रतिवद्धतापत्र तयार गरी जनताको घरघरमा गएका छौँ । जनताका गुनासा र समस्या सुन्ने, आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छौँ । ठाउँठाउँमा कोणसभा गर्ने, माडीवासीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै निर्वाचनको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौं ।माडीवासीलाई समृद्ध माडी कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । माडीको विकासका लागि विभिन्न सुझावहरु दिनुभएको छ । हाम्रा योजना र विगतमा गरेका कामका कारण माडीवासीको भरोसा हामीप्रति नै छ । माडीवासीले अगाडि बढ्ने हौसला दिनुभएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले मलाई उपमेयरमा उठ्ने अवसर दियो । म अत्यधिक मतले विजयी भएँ । म त्यतिबेलाको ‘म्यान अफ दि इलेक्सन’ हो । उपमेयरको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा मैले धेरै कुराहरू सिकेँ । जनताका वास्तविक समस्याका साथै समग्र माडीका समस्यालाई गहिरिएर बुझ्ने मौका पाएँ । अहिले मलाई मेयर भएर काम गर्ने आँट आयो । माडीवासीबाट पनि हौसला र प्रेरणा पाएँ । त्यसैले माडीवासीकै आकांक्षा पूरा गर्नकै लागि पार्टीसँग समन्वय गरेर मैले मेयरमा उम्मेदवारी दिएको हो ।
न्याय सम्पादन, अनुगमन, अपांगताका हक हितका विषयहरुका साथै राजस्व परामर्श समितिको संयोजकमा रहेर मैले इमान्दारीसाथ जिम्मेवारी पूरा गरेँ । माडीबाट धेरै महिलाहरु ठोरी नाका हुँदै बेचबिखनका लागि भारत लाने गरेको थाहा पाएर नियन्त्रणमा अगाडि बढ्यौँ । माडी नगरपालिकाबाट बाहिर जाने बगई नाकाबाट जाने बसहरुमा जाँच गर्न सहायता कक्ष बनाएर काम सुरु गर्‍यौँ। यसरी काम गर्दा हरेक वर्ष लगभग ७ देखि १८ जनासम्म महिला, बालिका, किशोरीहरुलाई उद्धार गर्न सफल भयौँ ।
यहाँका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था दर्दनाक छ । तपाईं उपमेयर हुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो ?
हामी निर्वाचित भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गरेका छौँ । सामान्य उपचारमा सरसल्लाह गर्न अहेब, अनमी र एक जना सहयोगी गरी तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बगौंडा अस्पतालमा महिलाहरु गर्भवती हुँदा वा सो क्रममा गर्नुपर्ने दुई वटा भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौँ । बगौडा अस्पतालसम्म सुत्केरी हुन आउन परे घरमा सवारी साधन छैन । एम्बुलेन्स चाहिए त्यो पनि निःशुल्क गरिएको छ । कतिपय सुत्केरी र शिशुमा पोषणको कमी देखियो । त्यसका लागि पोषणको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पोषणका कार्यक्रम पनि गरेका छौं ।
हामी नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि धेरै विकासका कामहरू भएका छन् । बाटाहरु चौडा भएका छन् । पुलहरु निर्माण भएका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माडीमा चार लेनको सडक र ११ ओटा पुल बनाउन बजेट दिएको थियो । अहिले काम धमाधम भइरहेको छ । यो बीचमा विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिएको छ । कृषि र पर्यटनमा आशालाग्दो परिवर्तन देखिएको छ ।
सुकुम्वासीहरुको स्थायी बसोवासको लागि पहल भइरहेको छ । यी कामहरू अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र र प्रदेश सरकारले धेरै सहयोग गरेको छ । यहाँहरुलाई थाहै छ । माडीमा रामअयोध्याधाम बनाउने भनेर पनि ठुलो चर्चा भयो । केही काम पनि भए । कतिपय काम हुनसकेनन् । अब अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले विगतमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार समृद्ध माडी बनाउनको लागि धेरै काम बाँकी छन् । मेयरमा निर्वाचित भएर सहमति र सहकार्यले तिनै कामहरु पूरा गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेकी छु ।
पाँच वर्ष तपाईंले उपमेयर रहेर काम गरिरहँदा आम मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके जस्तो लाग्छ ?
हामीले माडी नगरपालिकामा अर्गानिक कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छौँ । वडा नम्बर ८ मा प्रदेशकै नमुनाको रुपमा एउटा सामूहिक खेती सञ्चालन गरेका छौँ । मगर, थारु, बोटे, दुरालगायतका होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर ति समुदायका मानिसहरुलाई आयआर्जनसँग जोडेर काम गरेका छौँ । होमस्टेहरूले जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ । माडीवासीमा शैक्षिक चेतना बढेको छ । कृषि कार्यमा परिवर्तन आएको छ । तर पनि यो पूर्ण होइन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।
एमालेले तपाईंलाई नै माडी नगरपालिकाको मेयरको उमेदवार किन बनाएको होला ?
अहिले गठबन्धनबाट मेयरमा कुनै चौधरी उम्मेदवार नभएकोले सजिलो छ भन्ने तपाईं र तपाइँको पार्टीको आंकलन हो ?
यो जात विशेषको मात्रै विषय होइन । हाम्रो देश नै सबै जातजातिको साझा थलो हो । सबै जात जातिको संस्कृतिमा नै नेपाली संस्कृति विकसित हुन्छ । सबै जातजातिलाई सम्मान गर्दै संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । मेरो जित्ने आधार भनेकै माडीका जनता हुन् । सबै जात जाति, धर्म समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका जनता नै मेरो जितका आधार हुन् । म थारु समुदायमा जन्मिएको एक छोरी हुँ । त्यस समुदायले मप्रति माया गर्नु त स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ नि ।
माडीमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या छन्, जंगली जनावरका समस्या छन्, ठाडा खोलाहरुको समस्या छ । भूमिखण्डीकरणको समस्या छ यी समस्याको समाधान कसरी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
कृषि योग्य भूमि जथाभावी गरिने खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्ने मुख्य चुनौती बनेर आएको छ । यसलाई रोक्न नगरपालिकाले ठोस नीति ल्याउँछ । राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटोको सुधारका लागि हामी दुई–तीन पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन पनि गयौँ । कानुनी हिसाबले पनि त्यहाँ अवरोध छ भने अन्य कुराहरु पनि छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुनाले अन्य निकायहरुले पनि अनुमति दिनुपर्ने, आफ्नै खुसीले बनाउन नपाइने जस्ता कुराहरु छन् । निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनका कुरा छन् ।
यसमा हामीले सहजीकरण गर्न धेरै प्रयास गर्‍यौँ । यही कारणले यतिसम्मको बाटो निर्माण भएको हो । हामीले यसलाई धुलोरहित बाटो बनाउने भनेर पनि काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सोचेको हो । तर, विविध कारणले त्यहाँ अहिले रोकिएको छ । यसलाई अगाडि बढाउँछौं । जंगली जनावरबाट हुने मानवीय र अन्य भौतिक क्षति कम गराउन तारवार लगाउने योजना पनि छ । निकुञ्जसँग समन्वय पनि गर्छौँ ।
निस्सा बाड्ने काम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्रको विषय हो । माओवादीले बाँडेको भनेर जस लिन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या माडीमा चर्को छ । सुकुमबासीहरुको स्थानान्तरण र स्थायी बसोवास पुर्जा वितरणको पहल भैरहेको छ । केहीलाई हामीले निस्सा बाँडेका छौँ । निस्सामाथि पनि माओवादीले राजनीति गरिरहेको छ । निस्सा माओवादी केन्द्रले बाँडेको होइन । नगरपालिकालाई जे जति अधिकार थियो, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर हामीले काम गरेर नगरपालिकाले बाँडेको हो । माओवादीले बाँडेको भनेर जस लिन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई हामीले प्रतिवद्धता पत्रमा स्पष्ट पारेका छौँ । हामीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आयोगसँग समन्वय गरेर रोजगार सहितको स्थायी बसोवासको अवधारण ल्याएका छौँ । अझै पूर्णरुपमा हामीले निस्सा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । अब विजय भएर फेरि यसलाई निरन्तरता दिने हो । यस कामको लागि समय लाग्छ । हामी आत्तिनु हुँदैन । अहिले चुनावको माहोल छ । यो लगतै यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ ।
शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, सरसफाइ, विकास निर्माणका कुरालगायत अन्य बाटो, कलभर्टका कुरा सबैलाई हामीले एकदमै समान रुपमा अगाडि बढाउँछौँ । यहाँ रहेका धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, पर्यटन, कृषिमा प्रवर्द्धनका कुराहरू छन् । धेरै कुराहरुलाई समेटेर लानुपर्ने छ । म यी सबै कुराहरुलाई पूरा गर्न सक्छु । माडी नगरपालिकामा आन्तरिक बजेट कम हुँदा हुँदै पनि हामीले विभिन्न स्रोतहरु खोजेर अहिले माडी नगरपालिकाको बजेट बढाएका छौं । यो हिसाबले पनि समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ । मैले अगाडि भनेअनुसार नै सुन्दर, हराभारा र समृद्ध माडी बनाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो ।
मैले भष्ट्राचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । भष्ट्राचारीहरुका लागि गेट बन्द गर्ने छु । समृद्ध माडी बनाउने विषय सबैको साझा दायित्व हो, सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्ने छु । मेयरमा निर्वाचित भएर माडीवासीको शिर निहुरिने कुनै काम गर्ने छैन । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । समृद्ध माडी बनाउने विषयमा नै मेरो जीवन समर्पण गर्ने छु ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहँदा रुपन्देहीमा दलहरुले चुनावी गतिविधि तीव्र बनाएका छन् । रुपन्देहीको कुरा
काठमाडौं । नेपाली मिडियाका परिचित व्यत्विहरु तथा स्थापित पत्रकारद्धय शुभशंकर कँडेल र शारदा शर्माको हालै
माधवले हैसियत भन्दा बढी चुरीफुरी गरेको उपेन्द्र यादवको ठहर, सरकार अमेरिकी पिछलग्गु बनेको हिरन्यलाल श्रेष्को विश्लेष्ण (भिडियो)
काठमाडौं । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन भित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कारण गम्भीर सम्स्या बल्झेको जसपा अध्यक्ष